Go’aankii Xidhiidhka Kubbada Cagta England Ee FA-gu Gaadhay Oo Liverpool Si Dhab Ah Uga Dulqaaday Walwalkii Labada Bilood Haystay. – Gool24.Net
Go’aankii Xidhiidhka Kubbada Cagta England Ee FA-gu Gaadhay Oo Liverpool Si Dhab Ah Uga Dulqaaday Walwalkii Labada Bilood Haystay.
Kooxda Liverpool ayaa noqotay kooxda ugu farxada badan kadib markii uu xidhiidhka kubbada cagta England ee FA-gu si rasmi ah ugu dhawaaqay in ayna jirin wax doorasho ah oo xili ciyaareedka looga dhigi karo waxba kama jiraan.
Waxay kubbada cagta England soo martay laba bilood oo maalin kastaba ay soo baxayeen warar badan oo ka hadlayay waxa laga yeelayo xili ciyaareedka Premier league kadib markii uu Coronavirus noday musiibada aduunka kala xidhay.
Laakiin halka go’aan ee uu FA-gu caawa soo saaray ee uu maamulka Premier league iyo kooxaha uu ku war galiyay ayaa noqday mid si wayn looga soo dhaweeyay Anfield.
Laba arimood ayuu daaranaa go’aanka FA-gu waxaana ugu waynaa in ay hadda meesha ka baxday tixgalin kasta oo waqti lagu fikirayay in xili ciyaareedka laga dhigo waxba kama jiraan waxaana hadda cadaatay in xili ciyaareedka la dhamaystiri doono.
Kooxda Liverpool ayaa maalmo ku dhawaatay in ay ka quusato koobka ay 25 ka dhibcood hogaankiisa ku haysay isla markaana ay 6 dhibcood oo kaliya uga baahnayd kulamada hadhsan kadib markii ay kooxo Premier League ahi wadeen qorshe xili ciyaareedka lagu burburinayay.
Laakiin Liverpool ayaa taageero ka heshay kooxaha waa wayn ee Premier league oo dantooda ka dhex arkayay in xili ciyaareedka la dhamaystiro balse hadda waxa uu FA-gu gabi ahaanba u quus gooyay koox kasta oo ku fikiraysay in xili ciyaareedka waxba kama jiraan laga dhigayo.
Waxa uu go’aanka FA-gu si buuxda oo aan shaki ku jirin u damaanad qaaday in Liverpool ay Championska noqonayso waqti aan fogayn maadaama oo laysla qaatay in xili ciyaareedka garoomo madhan lagu dhamaystiro.
Laakiin arinta hadda si buuxda loo ogaaday ayaa ah in dhamaan kooxaha Premeir league ay maanta soo jeediyeen in dawlada UK lagu celiyo go’aankii garoomada dhex dhexaadka ahaa si koox kastaaba ay kulamada garoonkeeda u qaado masuuliyada badqabka iyo in taageero la’aan lagu ciyaari karo.
Waxayna tani keentay in maamulka Premeir league uu dawlada UK xidhiidh kala sameeyay in la badalo qorshihii ahaa garoomada dhex dhexaadka ah waxayna hadda u muuqataa in hal dariiq la wada maray oo xili ciyaareedku bilaami doono wixii ka danbeeya June 1.
Si kastaba ha ahaatee, go’aanka ka soo baxay FA-ga ee lagu mamnuucay in xili ciyaareedku aanu sinaba u noqon doonin waxba kama jiraan ayaa Liverpool ka dul qaaday walwal kasta oo ay soo martay labadii bilood ee ugu danbeeyay.